Roma oo aad ugu dhow inay heshiis la gaarto xiddig ka tirsan kooxda Barcelona… (Rakitic, Vidal mise laacib kale?) – Gool FM
(Rome) 25 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Roma ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto da’yarka kooxda Barcelona ee Carles Perez, kaasoo la fahamsan yahay inuusan waqtigan boos ka helaynin kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga.
Sida ay sheegeyso Majaladda Sky Sport Italia kooxda caasimadda Talyaaniga ayaa aad ugu dhow inay heshiis la gaarto Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Carles Perez, waxaana ay u badan tahay inuu Barcelona isaga tagi doono maalmaha soo socda.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Spain ayaa da’diisu noqonaysaa 22-sano bisha soo socota, waxaana uu ka mid ah xiddigaha sanadkii dhammaaday loo soo dallacsiiyay kooxda koowaad ee Barcelona, isagoo sameeyay bandhigyo il qabad leh oo soo jiitay indhaha kooxo badan oo ay ugu horreyso Naadiga Roma.
Carles Perez ayaa u saftay 13 kulan kooxdiisa Barcelona dhammaan tartammada rasmiga ah xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay saddex gool, isla markaana saddex gool oo kale caawiyay.
Waxa ugu wayn ee lagu xusuusto Carles Perez ayaa ah goolkii uu ka dhaliyay dheeshii ay Barca guusha ka gaartay kooxda Inter Milan ciyaar qeyb ka hayd tartanka Champions League.
Qandaraaskiisa Carles Perez uu kula jiro kooxda ku ciyaarta garoonka Camp Nou waxa uu dhacayaa bisha June ee 2022-ka, waana la arki doonaa haddii uu amaah ku adayo Roma ama heshiis joogto ah.
Perez ayaa laga saaray safka kooxda Barcelona ee dhammaadka isbuucaan, waxaana Perez loo arkaa inuu yahay badalka ugu habboon ee Nicolò Zaniolo, kaasoo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan dhaawac kaga maqnaan doona garoommada.